Uncedo - Ningbo Taili Bonus Rhweba ngaphakathi no Rhweba Co., Ltd
Abantwana iitrayisikile & Ride-ons
THINA sikholo ukuncedana
Ngaba wenze OEM & ODM?
Ewe, siphatha Original Izixhobo Manufacturing kunye Original Design Manufacturing ukuze abathengi bethu xa isicelo sabo. Ukuba ubungakanani order mkhulu ngokufanelekileyo, sinako ukufaka leshishini elo, kubandakanywa iilogo, okanye ukutshintsha i laphu okanye izinto ukuhlangabezana iinkcukacha zakho. Siza kusebenza ukuba bayile kwaye bavelise iimveliso zenzelwe ukwaneza iimfuno zakho.
ntoni yokuthumela kuthatha ixesha elide kangakanani?
amaxesha Shipping ziya kwahluka ngokuxhomekeke kwindawo yakho:
Imiyalelo S. iya kuthatha iintsuku zomsebenzi 3-5 lonikezelo express
odolo yaseYurophu luya kuthatha iintsuku zomsebenzi 1-5 ukuze ndibahlangule
Nezinye ii-odolo International luya kuthatha iintsuku zomsebenzi 6-20 ukuba akhulule
Irhafu / IMISEBENZI
eunited States FedEx okanye USPS (Utyikityo ukuze efunekayo) 3-5 Days Business Kuphela imali In CA & PA
Khanada USPS Priority and Canada Post 5-15 Days Business Amacala Country
European Union (EU) DHL Express * / GLS 1-5 Days Business VAT imali kusengaphambili
International USPS Priority / DHL Express * / Hongkong Post Speedpost 6-20 Days Business Amacala Country
Ngoku sebenzisa DHL njengomboneleli yokuthumela yethu entsha. Uninzi odolo ngamazwe ngoku ezithunyelwa kwi yempahla yethu e-Hong Kong okanye Netherlands (njengoko nganye stock efumanekayo), nto leyo iza kukhawulezisa kakhulu amaxesha ukuthunyelwa oda yakho.
Orders International: Izihlandlo ezinqabileyo kakhulu, lwezeenqanawa zamazwe ngamazwe ukuba amanye amazwe zingathatha iiveki 4-8 okanye ngaphezulu ukuba amanye amazwe kade-to-nqanawa ezifana Australia, Brazil, Mexico, kunye Romania. Asinaxanduva ukuba naziphi na ukulibaziseka okubangelwa iinkqubo ilizwe oya kaThixo zavunyelwa.
Territories of the United States: Kuba abo abahlala kwintsimi waseUnited States ukuba athumela ukuba, nceda ukuvumela naphi phakathi iintsuku zomsebenzi 5-15 oda yakho ukufikelela oya kuyo.
Ingaba ukhetha njani stroller ekunene?
Ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho, sinika iintlobo ezininzi stroller. Ungakhetha ukusuka kuluhlu olubanzi izinto ezifana pram zeentsana kuzalwa, stroller elula efikelelekayo compact, omnye strollers zethu obutofotofo ekupheleni eziphakamileyo, okanye stroller epheleleyo iseti umdla equka stroller, isihlalo imoto, kunye umgca epheleleyo lwezincedisi, njengesingxobo ilweyile, umnini indebe, isihlalo imoto iadaptha, athwale bhedana, kunye umnatha iingcongconi.
Ingaba unayo nayiphi na izitifiketi quality?
Ewe - thina EN esingqinisisiweyo kwakunye ukukhawulelana nemigangatho ephezulu yokhuseleko.
Yiba umbuzo? Kakhulu. Thina apha ukukunceda iintsuku ezisi-7 ngeveki kwaye aphendule kwisithuba seeyure ezingama-24. Plus, unako ukufumana iimpendulo ezininzi kakhulu kwimibuzo yakho ekunene kweli phepha.
Siya kuphendula email yakho kungekudala!
* Prince: Nceda ukhethe Intliziyo